Ubudlelwano phakathi kwabantu - into kuyinkimbinkimbi. Oyiqonda nomunye ngokuphelele, futhi abanye ngisho nelincane izizathu, kakade ezingeni esesimweni sokungaphili ngokuphelele, ngokuba nolaka. Okubaluleke kakhulu kuzo zonke ekuphileni omdala abe nobudlelwane bezocansi. Njengoba iyingxenye ebalulekile emshadweni, bayakwazi ukuthi sikhiphe zonke ezinye izinkathazo, noma, kunalokho, ukuze ujike ukuphila komkhaya esihogweni phila ekugcineni esehlukanisweni. Believe ukuthi amaplanethi kuthinte yonke imikhakha yokuphila komuntu noma cha - kuyindaba yangasese, kodwa eminye imininingwane ngayo engase ibe umlingani ngokuqinisekile ngeke.
Ithonya amaplanethi izakhi
Ababhula Ngezinkanyezi bathi usuku ngisho ngesikhathi sokuzalwa wumumo hhayi kuphela umuntu, kodwa lonke Isiphelo sakhe. Ukulandela "ngoba inkanyezi yakho", kungenzeka impumelelo empilweni, futhi uma simelane isiphetho ke ukuphila uya nenkinga enkulu. ukunakekela okukhethekile hola ababhula ngezinkanyezi ukutadisha ukuziphatha zezinkanyezi embhedeni. Zama ukuqonda lezi zici. Kwazi bani, mhlawumbe la idatha ukwenza abantu abaningi ukuba bathuthukise ukuphila kwabo siqu.
Cabangela izici womuntu omi uphawu zezinkanyezi namalungu amaningana. Ngokuyinhloko kuyinto element elifanelana nalo, futhi lokho okubizwa ngokuthi iplanethi elibusayo. Ngo parallel, ucabangela omuntu owazalwa ngonyaka (okuyinto uphawu isilwane), yisiphi isikhathi sosuku kanye nezinye izinto, kodwa izikhathi ezimbili zokuqala kukhona eziyisisekelo.
12 astrological signs zezinkanyezi angaphansi izakhi ezine: Umhlaba, amanzi, umlilo, emoyeni. Lokho isigaba uphawu zezinkanyezi, nethonya elikhulu ebuhlotsheni bakhe umlingani wakhe. Yiqiniso, ngaleso sikhathi ukuziphatha izimpawu zomgamu wezulu izici ezihlukahlukene embhedeni, kungase ivumelane kahle nhlangothi zombili, kodwa hhayi ngokuya sekukudala, kungcono ukuba ukhethe umngane wakhe 'umhlambi. " Cabanga element ngayinye ngokuningiliziwe.
Leli qembu siqukethe Aries, Leo futhi Sagittarius. Abakwazi lungachazwa yini igama elithi "amandla". Umsebenzi njalo yalezi zimpawu ezingenhla zezinkanyezi ebonakaliswa yonke imikhakha yempilo, kuhlanganise ngokuya nobuhlobo bobulili. Kodwa, ukuzama ukuyishaya ubuholi ukwamukeleka ngaphandle kokungatshazwa, laba bantu ngokuvamile ungatholi nozakwethu eqenjini. Isikhathi esining impela, abelana isikhathi eside, bese uyabuya ndawonye futhi.
Naphezu umsebenzi ngezinye izikhathi ngokweqile kuleli qembu kuvamile kakhulu Monogamous. Konke lokhu Izimpawu zezinkanyezi ngokuya ubuhlobo bobulili oshisekayo futhi unothando.
Lo msuka ivikela Taurus, Virgo ne-Capricorn. Zonke izimpawu ezintathu zezinkanyezi libhekene ngokuyinhloko usizo Ukusebenziseka, lokhu kusho amagatsha ukuphila komkhaya. Ngo umlingani wakhe bazama kuqala kunazo zonke ukuthola ukuzinza, hhayi uphilela inamuhla kanye zicabange ngekusasa, bakwazi ukubala kusengaphambili lokho abayikho kuyazuzisa yini noma ukuthi ubuhlobo. Ngokuya ocansini uqondisa uthando ikakhulukazi isilwane, okuyinto asemini ekhethekile ngokohlelo lokuhlelwa ukusondelana nabo, awukwazi ukubala. Umsebenzi embhedeni yalezi zimpawu ezingenhla zezinkanyezi futhi akudingeki ukuba balinde.
Ngu element of esemoyeni Gemini, Libra futhi Aquarius. Isimo Easy ekuphileni, futhi emotionality ngokweqile ngezinye izikhathi ukudala oyiphutha ngalaba bantu. Empeleni, izinqumo zabo elawula intelligence isizathu. Abantu kulezi Izimpawu zezinkanyezi are labo uthanda ukubhekisa amabombo. Esinye isici yazo uzizamele kuyo yonke imikhakha yokuphila, kufaka ekhatsi nobuhlobo bobulili. Emzamweni ukuzama konke ngaphambili, kusafanele kuhluke ukuthembeka, kodwa kuphela uma alukhethiwe imizwelo nengqondo.
Pisces, Umdlavuza futhi Scorpio kukhona isici amanzi. Kukholakala ukuthi lawa abathandi engcono. Bangase babe nomuzwa uzakwethu futhi, kuye ngokuthi isifiso sakhe sokuba yokwenziwa noma asebenzayo ngesikhathi socansi. I nobuhlobo bobulili owufunayo yini ukwaneliseka ngokomzimba kodwa futhi zokuziphatha kuphela. Uma abalingani basonta izakhi efanayo, ubuhlobo babo kuyoba eside futhi nolimi.
Uma ucabangela izakhi okuqondene abungafaniko uphawu zezinkanyezi, nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu futhi wenze sexy.
ubulili Omkhulu, kodwa kuphela ngokuhlangana ne ukuba nobuhlobo obungathi sina
Uma owesifazane yakho - Aries, ulungele nobuhlobo asebenzayo futhi unothando. Ingeyase isigaba uyazicabangela ubulili iyingxenye ebalulekile ukuba nobuhlobo obungathi sina, kodwa kamuva ngisho iminyaka akuvumeli ukuyivula endleleni yokuphila evamile. Kodwa singenciki kuphela ngesikhathi sokuzalwa komuntu ngokobulili. owesifazane Aries - kufezeka iphupho. Sexy, isifazane, uyakwazi ukusebenzisa embhedeni, futhi ngesikhathi esifanayo umama ekahle futhi wekhaya. Happy nayo kuyoba indoda kuphela, ikhono ukuqaphela igunya layo, kodwa hhayi kokushiya emthunzini abashadayo, uyakwazi ukulwa emuva uma kunesidingo.
Girls kunamathuba amaningi okuthi ukufunda umlingani wabo. Abanaso yokuwuthola ukunakwa ngesikhathi sokuzalwa komuntu ngokobulili. Aries - lover omkhulu, kodwa ukhetha ukuba nobuhlobo obungathi sina. Imvelo Bright abanothando efihla umphefumulo abasengozini okunxanelayo uthando lwangempela.
Umvikeli we Taurus kuyinto Venus. Lokhu kuchaza Ukwanelisa inkanuko yabo Amazing nokuyenga. Nge i umuzwa wangaphakathi, Taurus abakhethiwe njengoba umngane womshado ofanelekayo kuphela kubo abungafaniko zabantu. Labo abazalwa ngaphansi lona wesifazane uphawu Zodiac kuyoba choice ephelele ubani ngifuna inhlanganisela "unkosikazi-senkosikazi", kodwa khumbula nje:-ke ngeke abathethelele nanini zokungethembeki. Uma Taurus - indoda, siza uzilinde, ungaliphuzi simphika abaseduze, kungenjalo ngokushesha esolwa ukungathembeki njengoba umvuzo uthole yesehlakalo wobukhwele. Yena okholwa ukuthi ucansi - wumkhakha saziso ukuze sijabule, futhi ukulungele ukubhekana naso ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma ungenayo i-Ubumnene efanayo, kungcono ukuba bangalibali sekukudala nge Taurus.
Ukungabikho ephelele iziqinisekiso
Horoscope kwedivayisi zocansi Gemini uyakwazi shí ukushaqeka umlingani. Ubuhlobo bobulili buyisipho incike ngokuphelele isimo sabo. Ubulili ngabo - kuba ngokuyinhloko ukuxhumana ngokomoya nangokwengqondo, futhi contact ke ngokomzimba kuphela. Owesifazane Twins ulindela umlingani abanolwazi ngokuyinhloko uyaqonda futhi anakekele izidingo zakhe. Lokho kuchaza ukuthi kungani bale uphawu Zodiac ngokuvamile ekuziphatheni ngithanda abesilisa nabesifazane futhi kobungqingili. Owesilisa Gemini ngobuqotho abaqondi ukuthi kungani abantu ukunikeza khulu ocansini. Kubo, kungaba isandiso ubungani, isikhathi eside abalingane babo, kungukuthi exhumene. Abesifazane kanye namadoda alesi uphawu ehlanganisa Ukungaqiniseki liphelele, ukuze bahlanganyele nawo ubuhlobo engasoze uphumule.
ukungenela ubuhlobo obungathi sina - isibambiso wobuhle ucansi
Sexy Umdlavuza nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu kuzokusiza ukuqonda butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi budlelwane nemboni bale uphawu zezinkanyezi. Female Cancer ungaba yisikhulumi esihle lover Amazing, kodwa kwadingeka banqobe amahloni, futhi lokhu kudinga uqinisekiswa nakhuthazayo avela umlingani. Prelude zisa okungaphezu touch, futhi akakubekezeleli luhlata embhedeni. Abesilisa abazalwa ngaphansi lesi sibonakaliso zezinkanyezi, kuzinga enganakile, ngifuna ubuhlobo eside, ngakho musa ugijimele nge embhedeni sakhe esikhethiwe. Kuyiphutha ukuthi bakholelwa ukuthi abathandi ezimbi, sexy Umdlavuza nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu uthi kuphela uthando, bayakwazi usuvulekile. Uma umndeni wakho ayinakho izinhlelo, musa ukuchitha isikhathi sakho.
Ezama ukufakazela irresistibility yakhe
Lezi izimpawu zomgamu wezulu othandweni, efana Leo, njalo, ngezinye izikhathi ngisho ngaphandle kokuqaphela lokhu, kukhona esimweni Ukudlala ngothando nokuhlale ucabanga omnene. Okungenani, yilokho indlela zibona ezungezile. Kwenza futhi amadoda okuyenga, abesifazane Lions ngezinye izikhathi bazibuze ukuthi kungani nengxenye enamandla inesithakazelo ocansini. Kodwa kuvisisa lokhu kuza zisencane lapho abangane bakhe abaningi bamshiyile kakade unomkhaya, futhi abathandi zonke amadoda ashadile, maningi amathuba okuba. Horoscope kwedivayisi ngokobulili ayilitholi ephelele uma umlingani uyindoda-ibhubesi. He is kasibili impela of irresistibility sakhe. Efuna ukwakha ubuhlobo obuhlala njalo naye, kufanele ube ukulungele njalo kumethuse. Inzuzo undoubted yisifiso zifakazela ukuthi okungcono, okungukuthi, ngokuya ocansini, kanye nakwezinye izindawo ubuhlobo, uyozama ukunikeza konke.
enikeziwe ubudlelwane okubeka obala kuphela
Zimbalwa Izimpawu zezinkanyezi othandweni zihlukile kunikezelwa efanayo Virgin. Nokho, ngasizathu simbe, izibalo zibonisa ukuthi abantu abaningi abangashadile abaye bahluleka ukuqala umndeni, lingelikaJehova ukuthi uphawu. Lokhu kwenzeka ngenxa ngokungaqondi nemlingani wakho. Uma kunjalo, abalingani uyofika alolu, lapho bangakwazi nixoxe ngokukhululekile ngokungavumelani nezindaba, kuhlanganise maqondana ubulili, iyoletha imiphumela emihle kakhulu.
Isifiso sifinyelele nobunye ubuhlobo ngeke uhlale ususondele Libra. Abesifazane okuqondene lesi sibonakaliso ngeke ulinge ubulili kuze, baze bathole elamukelekile. Akukhona njalo uzakwethu isilungele nalokhu kuhlaselwa, futhi labo ziyaneliswa emkhakheni obuseduze, engathandi ukuxhuma ukuphila kwakhe owesifazane onjalo esebenzayo. Ukuthi baziphathe kanjani embhedeni izimpawu zomgamu wezulu, ngaphansi ukusekelwa Venus? indoda Libra akaboni isidingo sekukudala, futhi ngisho noma angikwazi ezoshada naye, ungabali ku ukwethembeka.
Shono kwathi ngemva kokuhlangana isibonakaliso umlingani zezinkanyezi uzama ukufunda konke mayelana nakho, kuhlanganise nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu ngokobulili. Scorpio elisabisayo ngesikhathi esifanayo ekhangwa uzibuthe uqobo. Ngokocansi, kuba nakho okuhle ngendlela engakholeki, kodwa kufanelekile kuphela kulabo othanda ukuba ulinge. Abesifazane esivelele zalesi sibonakaliso ingajabula kuphela indima umholi noma senkosikazi. Ukufihla izidingo zabo kusuka umlingani, bengathathi ukwaneliseka, futhi bayofuna ke kwenye indawo, ngakho-ke, hhayi kuphela uzakwethu, kodwa kowesifazane ngokwakhe akusho ubuhlungu ukuhlola ngesikhathi sokuzalwa komuntu zabo zobulili.
Scorpio indoda - ngezinga elithile usosayensi, into wafunda - owesifazane nomzimba wakhe. Lokhu kuvumela umlingani wakho ukuba nomuzwa wokuthi unkulunkulukazi, kodwa lo muzwa ngeke siphile isikhathi eside kuphela uma nje utawufundza umlingani.
Isitha zokuhlolwa olukhulu
Wabathanda lokho Izimpawu zezinkanyezi othandweni ayiyifuni ukuba ulinge futhi ukhetha efakazelwe eminyakeni izinketho mahle Sagittarians. Ubulili ngabo - phambili ubuhlobo, hhayi ingxenye yabo ngabanye. Okuningi ukusondelana kakhulu ayakwazisa okwandulela futhi ikhono lokukhulumisana oluyimfihlo ngemva kwalo. Nokho, injabulo, ukuthi lezi ubudlelwano, nabo ungayeki, futhi bayofuna ukufeza ukuvumelana okuphelele nomlingani wakho.
Ukubuyisela, kodwa kuphela impendulo
ubuhlobo bobulili Ideal ingatholakala nge Capricorn. Abesifazane, naphezu inhlangano esivelele, bakwazi ukuyekethisa nemlingani wakho. Ayathanda kuphela fun, futhi lokhu kuyofezwa kanjani - kungenye umbuzo. owesilisa Capricorn embhedeni, njengoba ekuphileni, sidinga ukuzinikezela sabalingani ngokuphelele. Ufuna it fanele kuphela kuye, futhi ngeke akubekezelele eduze izimbangi. Man Capricorn embhedeni uyakwazi kakhulu, kodwa kudingeka bahlale amqinisekise ohlukile futhi ngezinye izikhathi ngisho obala duda.
Into esemqoka - ukwehluka
Aquarius uyaqonda igama elithi "uthando" njengoba kusondelana okungokomoya nokungokwenyama. Uma enye yalezi zindawo, ubudlelwane akwanele basuke wanelisa, nenjabulo emshadweni ngeke zisebenze. Female Aquarians bayakwazi nganoma iyiphi ucwaningo. Into esemqoka - ukuze kuzuzwe idyll, futhi ukuthi uzokwenza konke okusemandleni abo, kodwa futhi phezu umlingani uzobe elinde impendulo, hhayi passivity. Khona-ke ukuziphatha izimpawu zomgamu wezulu, okuqondene isici amanzi embhedeni, ngezinye izikhathi Okumangaza abalingani babo. Kuqondane nokuthi siyohlale yokwenziwa kuqhathaniswa ngokuya ocansini ngokuzumayo Aquarius inikeza ukuzama into ezingavamile. Lokhu akusho ukuthi uzakwethu wadunyazwa noma okuthize onganelisekile. Njalo is ubuntu babo - ukuze siqikelele ukufunda izinto ezintsha.
Ngokocansi ngesikhathi sokuzalwa komuntu pisces kube enemisebenzi kakhulu. Cishe yimuphi omunye uphawu zezinkanyezi, bazuza nobunye ubulili ngenxa umuzwa wangaphakathi. Ikhono babe nesifiso umlingani kwenza abesifazane ka Pisces e intombi eseceleni ephelele, kodwa akazange kunganciphisa izimfanelo zabo njengoba uyinkosikazi nonina.
Sexy Horoscope Pisces evumela abesifazane ukukhetha bale uphawu zezinkanyezi ukuba umyeni. Ziyakwazi bethembekile kumlingani yabo futhi awudingi imigilingwane yakhe ekhethekile ngenxa ubudlelwane.
Ningaphendukeli kukhompuyutha ephathekayo "Lenovo": Izimbangela Nezingozi Solutions